Ho avoaka ilay Ejiptiana mpaka sary fanao an-gazety Mahmoud Shawkan rehefa nanapitra ny dimy taona tany am-ponja · Global Voices teny Malagasy
Nodidian'ny fitsarana tao Kairo higadra dimy taona izy
Voadika ny 10 Septambra 2018 5:37 GMT
Vakio amin'ny teny Español, English, русский, Italiano, македонски, عربي, Ελληνικά, English
Navotsotra ilay Ejiptiana mpaka sary fanao an-gazety, Shawkan, rehefa nandany dimy taona tany am-ponja tsy nanana vesatra fiampangana azy nankatoavina. Sary nifampizarana fatratra avy amin'i Ayman Aref.
Nomelohin'ny Fitsarana Ady Heloka Bevava ao Kairo higadra dimy taona ilay Ejiptiana mpaka sary fanao an-gazety Mahmoud Shawkan noho ny fanangonam-baovao nataony tamin'ny fifanandrinana nitranga tamin'ny taona 2013 tamin'ny fanaparitahana ny sit-in nitranga tao Rab'aa El Adaweya. Saingy efa nihoatra ny dimy taona izay no nitazonana azy tany am-ponja, nilaza ny mpisolovava azy fa ho afaka hivoaka malalaka izy ao anatin'ny andro vitsivitsy.
Ny fitsarana an'i Shawkan dia ao anatin'ny fitsarana olona maro dia maro miisa 739 voampanga taorian'ny fanaparitahana an-kerisetra ny tobim-panoherana iray manohana ny filoha Ejipsiana teo aloha Mohamed Morsi tamin'ny taona 2013. Nandritra io fotoam-pitsarana io ihany, mpikambana ambony sy mpiara-dia amin'ny Mpirahalahy Miozolomana miisa 75 no nomelohina ho faty.
Nampangaina ho namono olona sady mpikambana ao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana izay tondroin'ny governemanta maro eo amin'ny reniparitra ho vondrona mpampihorohoro i Shawkan, 31 taona.
Voaongana ny Filoha Morsi taorian'ny fihetsiketseham-bahoaka nanohitra azy tamin'ny faraparan'ny taona 2013. Ny fanonganana an'i Morsi, izay notarihan'ny filoha mitondra amin'izao fotoana izao, ny Filoha Abdelfattah el Sisi, dia narahina famoretana anisan'ny henjana indrindra nahazo ny Islamista sy ny mpanivaka amin'ny fitenenana, ary izany no niteraka fahabangana lehibe eo amin'ny sehatry ny fanoherana ao Ejipta.
Fanalavana ny famonjana
Nohalavaina ny fitazonana an'i Shawkan noho ny fanemorana ny fotoam-pitsarana fa tsy nahitana fiampangana ofisialy nankatoavina. Na ny fiampangana na ny fanemorana ny fotoam-pitsarana dia samy notsikerain'ny olona ary niteraka fanentanana faobe miantso ny hamotsorana an'i Shawkan. Ny sasany amin'ireo vondrona nanao fanentanana ny fanafahana azy dia ry Press Behind Bars, Press Uncuffed, Freedom for Shawkan, ary ny Lokan-tsarin'i Shawkan – fifaninanana iray mikendry ny hampiavaka ny fakana sary fanao an-gazety ao Ejipta.
Fonja Torah, iray amin'ireo fonja malaza indrindra manerana an'i Ejipta fantatra amin'ny fampiatranoana ireo gadra politika, no toerana nitazonana an'i Shawkan. Tamin'ny Marsa 2015 i Shawkan nanoratra taratasy izay navoakan'ny Komity Fiarovana ny Mpanao gazety (CPJ), manoritsoritra ny fonja Torah ho toy ny toeram-pasana:
Eto no toerana famonoana ny nofinofy. Paradisa kintana dimy amin'ny lasitry ny fonjan'i Ejipta, matory amin'ny gorodona taila mangatsiaka aho, Ahantoko amin'ny fantsika ambonin'ny kidoroko manify ny harona misy ny fananako. Misy “lakozia” kely ahafahanay mikarakara ny sakafonay ato. Vilany elektrika tokana no anananay, izay ampiasainay ihany koa hanafanana anay mandritra ny volana ririnina. Ny lakozia kely dia mifandaka amin'ny fidiovana, izay raha ny marina dia lavaka iray amin'ny gorodona. Bodofotsy nahantona no manasaraka ireo toerana roa ireo hiezahana mba misy ihany ny takonana. Efa tavela ao am-bavahadin'ny fonja moa ny fahamendrehanay.
Tamin'ny Avrily 2018, Shawkan no Ejiptiana voalohany nahazo ny lokan'ny Fahalalahan-gazety UNESCO rehefa nofantenan'ny vondrom-pitsara mahaleotena ahitana matihanina amin'ny fampitam-baovao iraisampirenena, voninahitra izany nomelohin'ny minisitry ny raharaham-bahinin'i Ejipta sy ny parlemanta.
Fifaliana manoloana ny didim-pitsarana
Nanaovan'ny vondrona mpandala ny zo sy ireo mpikatroka ao amin'ny media sosialy fankalazana ny famotsorana tsy ho ela an'i Shawkan. Nanondro ny gadra politika teo aloha Mohamed Soltan fa tsy tokony notazonina aloha voalohany indrindra ity mpanao gazety miahy tena ity:
Shawkan, mpanao gazety efa nahazo loka, nodidiana higadra dimy taona (izay efa novitainy).
Ho avoaka i Shawkan. Tena tsara izany fa ho afaka ihany izy. SAINGY tsy tokony ho any am-ponja amin'ny maha mpaka sary fanao an-gazety azy izy aloha voalohany.
Bel Trew, mpanao gazety, nanamafy ny siokan'i Soltan niteny hoe:
Vaovao tena mahafinaritra fa ho afaka ihany i Shawkan. Saingy noho izy efa nigadra 5 taona – didy navoaka androany. Tsy tokony ho any am-ponja velively izy. Nosamborina izy raha nanao ny asa maha-mpaka sary azy.
Osama Gawish, mpanolotra fandaharana TV, nitsikera ny fanamelohana ireo niharam-boinan'ny fandripahan'olona tao Raba'a:
Arahabaina i Shawkan sy ireo rehetra maherifo ho avotsotra. Menàra izay mpitsara tsy manana tsikala-pieritreretana sady mandoto ny rariny ary manameloka ireo lasibatra hafa tamin'ny fandripahana tao Raba'a.”
Faly [miaraka] amin'ny fianakaviana Shawkan ny mpikatroka Mostafa Hegazy:
Na dia iray monja aza ny vaovao mahafaly eo anivon'ny vaovao mampalahelo maro, farafaharatsiny aloha mba sambany misy fianakaviana iray faly androany tao anatin'ny dimy taona. Arahabaina amin'ny fanafahana anao ry Shawkan”
Didim-pitsarana ho fanohanana ny famoretana?
Na dia fandresena ho an'ny mpiaro ny zon'olombelona aza ny famotsorana an'i Shawkan, dia didy nitsarana azy dia miaraka amin'ny didy famonoana ho faty olona 75.
Ny didin'ny fitsarana dia mifanaraka amin'ny fomba fiasan'ny Filoha Abdelfattah el Sisi hisambotra ireo mpikambana ao amin'ny Mpirahalahy Miozolomana taorian'ny fandresena fanindroany tamin'ny fifidianana filoham-pirenena tamin'ity taona ity izay mpanohana ny fanentanana azy ihany no tokana nifaninana taminy, ka mametraka fahefana betsaka kokoa ho eo am-pelatanan'ny miaramila.
Na amin'ny alalan'ny fisamborana faobe na fitsarana politika na fampanjavonana ankaterena, efa nanao ny zavatra rehetra azo natao i Sisi hahafongana tanteraka ny Mpirahalahy Miozolomana hatramin'ny naha-filoha azy tamin'ny taona 2014.